Umaka: isikhathi esichithwe kuseshini | Martech Zone
Umaka: isikhathi esichithwe kuseshini
Sikuthanda okuqukethwe okungadliwa okulula kakhulu njengomuntu olandelayo, kepha ngikholwa ukuthi kunombono oyiphutha omkhulu embonini yethu. Umbono wokuthi ukunakwa kwezikhala kuncipha kudinga umongo othile obekwe nxazonke zawo. Okokuqala, angivumelani neze nokuthi abantu basebenzisa amandla amancane ukuzifundisa ngokuzungeza isinqumo sabo esilandelayo sokuthenga. Abathengi namabhizinisi asebenzise isikhathi esiningi ngaphambi kokwenza ucwaningo asenza ucwaningo oluningi manje. Ngisebenzise imibiko yezibalo